KIA , SPORTAGE , 2017 , YGN – Super Seven Stars
KIA , SPORTAGE , 2017 , YGN
Warranty Expiry Date 07 . SEPTEMBER . 2020
Insurance Expiry Date 22 . SEPTEMBER . 2020
KIA Sportage ကားသည် Engine power 2.0 L / Gasoline /6Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade /5ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…….
KIA Pre Owned Cars ကားများအား ဝယ်ယူလိုပါက လက်ငင်းငွေချေစနစ် (သို့မဟုတ်) ( ၁ ) နှစ် မှ ( ၃ )နှစ် အထိ အရစ်ကျစနစ် ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ကားတန်ဖိုး၏ ၃၀% ပေးချေပြီး ကားအား ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်….
Pre Owned ကားများ အကြောင်းသိရှိလိုပါက Facebook – Super Seven Stars ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိူင်ပြီး (သို့မဟုတ်) ဖုန်းနံပါတ် – 09 977 333 999 ,09 969 933 637 , 09 969 933 649 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…..
KIA Sportage သည် ခန့်ညားလှပ၍ အားအင်အပြည့်ဖြင့် ဆွဲဆောင်မူရှိသော Design အသွင်အပြင် နှင့်အတူ မြင့်မားဆန်းသစ်သော ခေတ်မှီနည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်ထုတ် လုပ်ထား သည့် Sport Type ဆန်သော SUV ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
KIA Sportage ၏ဆီစားနှုန်းမှာ ပျမ်းမျှ တစ်ဂါလံလျှင် မြို့တွင်း 21 မိုင် နှင့် မြို့ပြင် 28 မိုင် နှုန်း ဖြစ်သောကြောင့် ဆီစားသက်သာစွာမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
KIA Sportage ဟာဆိုရင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ထုတ်လုပ်မူအနည်းဆုံး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မူနှင့်ကိုက်ညီသောကားတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်ခုံများမှာ leather seats များဖြစ်ပါ သောကြောင့် သက် တောင့် သက်သာ ဖြင့်လိုရာ ခရီး ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာသွားလာနိုင်သည့်အပြင်မတော်တဆ ကားပေါ်တွင် ဖိတ်စင် စွန်ထင်းခြင်းများကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်င်ခြင်းနှင့် အနံ့အသက် ဆိုးများထွက်ခြင်း မှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
KIA Sportage Engine သည် Engine power 2.0 CRDi Diesel Engine အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်.ဆီစားနှုန်းမှာ ပျမ်းမျှ တစ်ဂါလံလျှင်မြို့တွင်း၂၂မိုင်နှုန်း၊ Highway၂၉ မိုင်နှုန်း ပျမ်းမျှမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် Button Starter ဖြစ်သောကြောင့် စက်နိုးရာတွင်သာမန် Key များကဲ့သို့ လှည့်ဖွင့်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ အလွယ်တကူခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်စက်နှိုး စက်ရပ်နိုင်ပါသည်။
Steering ၏ဘယ်ဘက်တွင် entertainment နှင့်ပတ်သတ်သော FM/CD/Phone ပြောင်းရန် Mode နှင့် အသံအတိုးအကျယ်၊ channel ပြောင်းရန် ခလုတ်များ ပါဝင်သောကြောင့် ကားမောင်း နေစဉ်အတွင်း အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပြီး Bluetooth hand Free System ပါဝင်သည့်အတွက် ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်း Bluetooth ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းပြောနိုင်သဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဖုန်းပြောရင်းမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
Sportage 2017 ၏ထူးထူးခြားခြားအားသာချက်မှာ ခေတ်မီ Wireless Charger ကိုထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ဖုန်း battery သွင်းရာတွင် ဖုန်းမထိခိုက်စေဘဲ တည်ငြိမ်သော Volt အားဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ဖုန်းများကို ခေတ်မီ Wireless Charger ဖြင့်ယုံကြည်စွာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Electric Parking Brake စနစ်ဟာရိုးရိုး Hand brake များထက် ပိုမိုလွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်
High Way လမ်းမများပေါ်တွင်မောင်းနှင်ရာ၌ အမြန်နုန်းကိုလိုသလိုသတ်မှတ်ပေးထားပြီးမောင်းနှင်နိုင်သည့် Cruise Control System ပါဝင်သည့်အတွက် အရှိန်လွန်မောင်းနှင်မိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုသည့်အပြင် ယာဉ်မောင်းမှလီဗာအချိန်ပြည့် နင်းထားစရာမလိုသောကြောင့် သက်သောင့်သက်သာဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
ဂီယာ မှာ6Speed Auto Transmission အသုံးပြုထားပါသည်။
KIA Sportage ၏ နောက်ကြည့်မှန်မှာ Electric chromic mirror ဖြစ်သောကြောင့် ညအချိန်ကားမောင်း နေစဉ် မိမိယာဉ်နောက်မှကား၏ မီးကြောင့် ဖြစ်စေသော မျက်စီစူးရှမှုကို ကာကွယ်ရန် နောက်ကြည့်မှန် အားမှေးမှိန်၍ အလင်းပြန်မှုအားနည်စေခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ သို့သော် ဘက်ဂီယာထိုးလျှင် နောက်ရှိမြင်ကွင်းအား ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်စေရန် ထိုစနစ်အားရပ်တန့်ပြီး ပုံမှန်အလင်းပြန်မှုအားပြန်လည် ရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Driver Seats နှင့် Front Passenger Seats တို့သည် Heated and Ventilated Seats များဖြစ်သောကြောင့်အပူအအေးကိုစိတ်တိုင်းကျထိန်းညှိနိုင်ပါသည်။
Driver ထိုင်ခုံမှာ 10-Motors Seats adjust ဖြစ်သောကြောင့် ကားမောင်းသူ၏အရပ် အနိမ့်၊ အမြင့် ခန္ဓ္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား အပေါ်မူတည်၍ သက်တောင့်သက်သာဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက် ထိုင်ခုံကို အနိမ့်၊ အမြင့်၊ ရှေ့တိုး၊ နောက်ဆုတ် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခါးကိုသက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်အောင်ထောက်ကူပေးခြင်း၊ ကြောမှီအရှေ့အနောက်၊ ခြေသလုံးအနေအထားတို့ကို ကူထောက်ပေးခြင်း တို့ကိုလိုအပ်သလို ချိန်ညှိထားရှိနိုင်ပါသည်။
Dual-Zone full auto climate control System သည် ကား၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့် ညာဘက်ခြမ်းတို့ကို အပူချိန်ကွဲပြားစွာ ထိန်းချုပ်မှုပေးထားနိုင်သည့်အတွက် ကားတစ်စီးထဲတွင် အဲကွန်း၏ Temperature က်ို လိုသလို အရှေ့အနောက်၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ ထားရှိအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် အအေးဒဏ်မခံနိုင်သူ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် အအေးနှစ်ခြိုက်တတ်သူ လူငယ်များ အတူတကွစီးနင်းရာတွင် အဆင်ပြေမှုများကို ရရှိစေပါသည်။
ကားပါကင်ထိုးရာတွင် ကူညီပေးသော Parking Assist System သည် ကား၏အရှေ့တွင် Sensor4လုံး၊ နောက်တွင် Sensor4လုံး တို့ဖြင့်အာရုံခံ၍ ဒိုင်ခွက်တွင်အချက်ပြပေးသော စနစ်ဖြစ်သဖြင့် ပါကင်ထိုးနေစဉ်တွင် ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။
၄င်းအပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားသောနောက်ကြည့် Camera တွင်လည်း မော်တော်ကားပါကင်ထိုးရာ Direction အတိုင်း guideline ပါဝင်သောကြောင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ပါကင်ထိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကားတံခါးလက်ကိုင် Design ပိုမိုပေါ်လွင်လှပစေရန် Chrome လိုင်းဖြင့်Sport ဆန်ဆန်ဖန်တီးထားသည့်အပြင် lock Button ပါရှိသည့်အတွက် ကားအနီးနားတစ်မီတာအတွင်းတွင် key နှင့်အတူရှိနေပါက Smart key ကိုလုံးဝထိစရာမလို ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် အလွယ်တကူ ကားတံခါး lock ဖွင့်နိုင်ပါသည်။
Panoramic Sunroof ပါဝင်သောကြောင့် ရိုးရိုးပုံမှန် Sunroof များကဲ့သို့ ရှေ့ခုံတန်းတွင်ထိုင်သူ နှစ်ဦးသာ Sunroof ၏ခံစားချက်ကိုသိရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ကားတစ်စီးလုံးတွင်ရှိသော Passenger များအားလုံး Panoramic Sunroof ၏ရသကို အပြည့်အ၀ရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ Panoramic sunroof အောက်တွင် နေရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်နိုင်မည့်Auto Adjustable roll-up sunblinds လိုက်ကာ ပါဝင်ပါသည်။
Sportage 2017 ၏ရှေ့မီးခွက်ဟာဆိုရင် High Intensity Discharge System ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် မီးခွက်၏အပူရှိန်ကိုသက်သာစေပါသည်။ Sportage 2017 ၏ Day light ဟာဆိုရင် LED မီးသုံးပွင့်နှင့် လှပဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းဖြစ်ပါသည်.
တောင်ပေါ်ဒေသများကိုခရီးသွားခြင်းကို နှစ်သက် သူများ နှင့် ဆောင်းတွင်းအခါမြူဆိုင်းသော အချိန်များ၌ ကား မောင်းနှင်ရာတွင် ရှေ့သို့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နိုင်ရန် ကူညီပေးမည့် Fog lamp နှင်းခွဲမီးလည်း ပါဝင်ပါ သည်။
Smart power tailgate ပါဝင်သောကြောင့် Smart key switch ကိုလုံးဝထိစရာမလိုပဲ ကားအနောက်ဘက် တစ်မီတာအတွင်းတွင် key နှင့်အတူရှိပါက နောက်ဖုံး Auto ပွင့်သော System ပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
Head lamp washer ပါဝင်သောကြောင့် High way ခရီးသွားလာလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရှေ့မီးကြီးမီးထွန်းရာတွင် အနှေုာင့်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဖုန်၊ အမှိုက်သရိုက် များ ကပ်ညှိနေပါက ၄င်း Head Lamp Washer မှ ရှေ့မီးကြီးပေါ်သို့ ကားမောင်းနှင်နေရင်းဖြင့် ရေးဖျန်းသန့်စင် ပေးနိုင်ပါသည်။
Dynamic Bending Light System သည် ကားကွေ့သည်လမ်းကြောင်းနှင့် အတူ အလင်းဖြာထွက်သောကြောင့် ညအခါလမ်း အချိုးအကွေ့များတွင် ကြည်လင်ပြတ်သား စွာဖြင့်မြင်နိုင်ပါသည် ကားတစ်စီးရှေ့တွင်ရှိလျှင် မိမိကားမီးကြောင့် ရှေ့ကားအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ ဘေးသို့အလင်းဖြာပေးသော စနစ်လည်းပါဝင်ပါသည်။
Electric Stability Control System သည် အရှိန်ဖြင့် မောင်းနှင်နေသော မော်တော်ယာဉ်အား ရုတ်တရက် ကွေ့လိုက်စဉ်တွင် ဖြစ်တတ်သော မော်တော်ယာဉ် Slip ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသောစနစ် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစနစ်သည် မော်တော်ယာဉ်၏ ဦးတည်ချက်၊ လားရာအတိုင်း သွေဖယ်မသွားအောင် ထိန်းကျောင်းပေးသောစနစ် ဖြစ်ပါသည်။
Sreering မှာ ပုံမှန်ကားများ2ပတ်သာကွေ့နိုင်သောအခြေအနေတွင် KIA New Sportage Steering သည် 2.7 ကွေ့နိုင်သောကြောင့် နေရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းမလိုဘဲ သက်တောင့်သက်သာဖြင့် ကွေ့နိုင် Parking လုပ်နိုင်ပါသည်။
မတ်စောက်သောကုန်းအတက်တွင် ရုတ်တရက် ရပ်နေရာမှ စအထွက်တွင် ဖြစ်တတ်သော မော်တော်ကားနောက်ပြန်လိမ့်ကျခြင်း မဖြစ်အောင် ကူညီပေးသော Hill Assist System ပါဝင်သောကြောင့် ကုန်းအစောင်းအနေအထားမှာပင်လျှင် စိုးရိမ်စရာမလိုပဲ စတင်ထွက်ခွာ နိုင်ပါသည်။
Auto Light Control သည် ပတ်ဝန်းကျင်မှောင်လာလျှင် အလိုအလျောက် မီးကြီးဖွင့်ပေးသော Function ဖြစ်၍ ရုတ်တရက် အမှောင်အတွင်းသို့ ( ဥပမာ – လှိုင်ခေါင်းအတွင်းသို့ဝင်လျှင်ပင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ ၀င်ရောက်) မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
Rain Sensor သည်ကား၏ ရှေ့လေကာမှန်ကြီးအတွင်းဘက်တွင်ရှိပြီး မိုးရွာသောအချိန်တွင် မှန်ပေါ်သို့ကျလာသော မိုးရေစက်အနည်းအများပေါ်မူတည်၍အာရုံခံပြီး wiper ကို အနှေးအမြန် အလိုအလျှောက်အလုပ်လုပ်စေသဖြင့် Wiper ခလုပ်ဖွင့်စရာမလိုတော့ဘဲ အလုပ်ရူပ်မှုမှသက်သာ စေပြီး ကားမောင်းရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။
Super Seven Stars Motors မှမော်တော်ယာဉ် များအား အောက်ပါအချက်များဖြင့် ၀န်ဆောင်မှူများ ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်……
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် – 09 977 333 999 ,09 969 933 637 , 09 969 933 649 , 09 969 997 413 ,09 969 997 415 , 09 969 997 416 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်…….
Super Seven Stars Motors မှ ရောင်းချပေးနေသည့် Kia Pre Owned ကားများကို Cash Down (သို့မဟုတ်) Hire Purchase စနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိူင်ပါတယ်။
Hire Purchase စနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက ကားတန်ဖိုး၏ ၃၀% ပေးသွင်း၍ ကားအားပိုင်ဆိုင်နိူင်ပြီး ကျန် ၇၀% ကိုဘဏ်အတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ၁၂ ရစ် ၊ ၂၄ ရစ် အများဆုံး ၃၆ ရစ်ထိ လူကြီးမင်းတို့အဆင်ပြေသလို ပေးသွင်း၍ လဲဝယ်ယူနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျာ……
30 % Down Payment
Selling Price 47,000
30% Down Payment 15,228
Monthly Payment For 1 Year 2,939
30% Down Payment 15,557
Monthly Payment For2Years 1,564
30 % Down Payment 15,886
Monthly Payment For3Years 1,109